Shir ay isugu yimaadeen wax garadka Hawiye oo Muqdisho ka dhacay | KEYDMEDIA ONLINE
Shir ay isugu yimaadeen wax garadka Hawiye oo Muqdisho ka dhacay
Shir ay isugu yimaadeen Wax-garadka kasoo jeeda Beesha Hawiye ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana laga soo saaray War-murtiyeed.
MUQDISHO, Soomaaliya - Magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay shir weyne ay isugu yimaadeen Odayaasha iyo wax garadka beesha Hawiye ayaa waxa uu ka dhacay Hotel Afrik ee magaalada Muqdisho, waxaana laga soo saaray shirka Afar iyo toban qodob. kuwaasoo kala ah:
1- In Beelaha Hawiye is cafiyaan, meelna uga soo wada jeestaan danahooda.
2- In degdeg la dhiso Gole Guurti oo taladu ka go’do.
3- In la dhiso Dowlad Goboleedka Banadir State iyo Guddi loo magacaabo dardar gelinta maamulkaasi,
4- Si loo badbaadiyo dalka waa in la qabto doorasho la isla ogol yahay oo ku dhacda waqtigeeda
5- In talada xal u raadinta Doorashada in laga qeyb geliyo dhamaan Saamileyda siyaasadeed sida dowladda, maamul Goboleedyada iyo mushirixiinta xilka Madaxweynaha si loo helo doorasho la isku racsan yahay.
6- Shirweynaha wuxuu uga digayaa Madaxweynaha dowladda Federaalka cawaaqib xumidda ka dhalan karta fuquuqda iyo heyb sooca lagu hayo saraakiisha iyo ciidamada kasoo jeeda beelaha Hawiye.
7- In ciidamada qaranka laga qeyb galinaayo ku lug lahaanshaha loolanka siyaasadeed
8- Shirweynaha wuxuu uga digayaa shirkadaha Caalamiga ah ee Batroolka soo saara inaysan hehsiis la gelin dowladda watigeeduu dhammaaday, heshiisyadaasina aysan ka dhaqan geli doonin degaanada Beesha hawiye
9- In la joojiyo daandaansiga lagu hayo musharixiinta madaxweynaha ee kasoo jeeda Beesha Hawiye.
10- In lagu dhaqmo dastuurka dalka oo caddeynaya in ogolaansho la’aan la abaabuli karo, lagana qeyb geli karo bannaabaxyada nabadeed.
11- Shirweynaha wuxuu cambaareynayaa falkii lagu rasaaseeyay shacabkii bannaanbaxa nabadeed dhigayay, waxayna dalbadeen in askarigii rasaasta ku riday bannaanbaxayaasha la hor keeno maxkamad.
12- In Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi looga danbeeyo xulista xildhibananada Waqooyi
13- Haddii la gaaro muddada xil heynta ka horna la gaari waayo xal siyaasadeed in la dhiso Gole Qaran oo xilka sii haya muddada kala guurka.
14- In Dowladda ay joojiso qalalaasaha iyo isku dirka ay ka wado Gobolka Hiiraan.